TOP NEWS:’Siyaasiyiin iyo Xubno kale oo katirsan Golaha Samatabixinta Puntland oo la Xiray | Booqasho.org News Online - Tabiyaha Wararka Xaqiiqda Ah
Home Wararka Maanta TOP NEWS:’Siyaasiyiin iyo Xubno kale oo katirsan Golaha Samatabixinta Puntland oo la...
TOP NEWS:’Siyaasiyiin iyo Xubno kale oo katirsan Golaha Samatabixinta Puntland oo la Xiray
Magaalada Garawe ee caasimada Maamulka Puntland waxaa maanta lagu xiray Xubno Siyaasiyiin iyo ganacsato isugu jira ah oo katirsan Golle dhawaan lagu dhawaaqay oo loogu magac daray Golaha Samatabixinta Puntland.
Ciidamada booliiska maamulka Puntland ayaa xabsiga dhigay afar xubnood oo katirsan golaha cusub ee looga dhawaaqay Puntland, waxaana xubnaha la xiray ay kala yihiin Dr Cabdiraxmaan Siciid Dhegaweyne ,Daahir Ciiro ,Feysal Faarax Cali iyo Ganacsade Duni Maxamed Guulato
Guddoomiyaha Gobolka Nugaal Cumar Cabdulaahi Farawayne ayaa sheegay in xubnahan lagu xiray Garawe ay abuurayeen xaalado nabad galyada gobolka wax u dhimaya sidoo kale ka shaqeenayaan xasiloonida darada Puntland.
Xubnahan la xiray oo isugu jira kuwa horey xikal uga soo qavbtay Dowlada Soomaaliya iyo Maamulka Puntland ayaa kasoo horjeestay shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Kismaayo, waxa ayna xubnahan dhaliil u jeediyeen Madaxweynaha Puntland.
Maamul goboleedyada dalka ka jira oo xiligan wajahaya kacdoon siyaasadeed ayaa bilaabay in ay xir xiraan sidoo kale deegaanadooda ka hor istaagaan in ay yimaadaan xubnaha ay u arkaan in dowlada Federaalka taageersan yihiin kana soo horjeedaan siyaasadooda.
Previous articleXukun Dil ah oo lagu riday Xayawaan Duur Joog ah oo Afar qof dilay !!
Next articleDeg Deg:’Kooxda Shabaab oo La Wareegay Deegaanka Bariire